ဖန်ဆင်းလျင် ဖန်ဆင်းရှင်ကိုမည်သူဖန်ဆင်းသနည်း - ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပုံရိပ်များ
Home တရားဒေသနာ ဒဿန ဘုရားအဖြစ်တော် ဖန်ဆင်းလျင် ဖန်ဆင်းရှင်ကိုမည်သူဖန်ဆင်းသနည်း
Samuel Soe lwin 1:21:00 AM တရားဒေသနာ, ဒဿန, ဘုရားအဖြစ်တော်,
မေးခွန်းများကိုဝါသနာပါသူများအတွက် အရှည်ကြာဆုံးသောမေးခွန်းလည်းဖြစ်သည်။ သာသနာပတွင်ကြီးပြင်း လာခဲ့သည့်အားလျှော်စွာ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း “အဘယ့်ကြောင့် ဘုရားမရှိရမှာလဲ” ဆိုသည့်မေးခွန်းက ကြီးစိုးခဲ့သည်။
The LDS church (Mormonism) တို့က ဘုရားသခင်(Elohim) သည် ကျွန်ုပ် တို့၏ဖခင်အဖြစ်တည်ရှိတည်နေတော်မူပြီးကျွနု်ပ်တို့သည် လူသားများအဖြစ် ဤမြေကမ္ဘာတွင်လူ့အဖြစ်ရှိနေ ကြောင်းဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် တစ်နေ့တွင်ဘုရားဖြစ်လာကြမည်။ အခြားသော ဘာသာ တရားများကလည်း ဘုရားကသာဘုရားများကိုဖြစ်ပွားစေသည်ဟုဆိုကြသည်။ထိုသို့ဆိုသော် ပြဿနာက ပထမဦးဆုံး သောပြဿနာဖြစ်ပြီး၊ သည်ဘုရားက ဘယ်ကနေရောက်လာသနည်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုမေးခွန်းများအတွက် ဘာသာတရား သည်အဖြေကိုမပေးနိုင်ပါ။ ခရစ်ယာန်တို့ယုံကြည်ချက်တွင်ကား ဘုရားတည်ရှိသည်ဟု ခံယူထားသည်။ ထိုသြဝါဒမျိုးကား ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား။ သိပ္ပံကထိုအရာအတွက် အထောက်အမဖြစ်ပါရဲ့လား။
သမ္မာကျမ်းစာ၏ပထမဦးဆုံးသောစာမျက်နှာတွင်ပင် ဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်း ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွင်တွေ့ရသည်။ “အစအဦး၌ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏”(က၊ ၁း၁)။ ထိုကျမ်းစာက ကျွနု်ပ်တို့၏ အချိန်၊ နေ့၊ ရက်၊ လ၊ နှစ်နှင့် ကမ္ဘာကြီးမတည်မှီကပင်တည်ရှိတည်နေတော်မူကြောင်းကိုဆိုထားသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်လည်း များစွာ သောနေရာတို့တွင် အချိန်ကာလတို့အထက်၌ ဘုရားသခင်တည်နေကြောင်းပြဆိုထားသည်။
*“ဤကမ္ဘာမတည်မရှိမှီ၊ငါတို့၏ဘုန်းအသရေဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသောပညာ၊ နက်နဲသော အရာ၌ ဝှက်ထားသော ဘုရားသခင်၏ ပညာကိုငါတို့သည်ပြသကြ၏။” (၁ ကော၊ ၂းရ)။
“ရှေးကာလမရောက်မှီ ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အဖို့ ကိုယ်တော်တိုင်ကြံစည်တော်မူသော ကျေးဇူးတော်နှင့် အညီ ငါတို့ကိုကယ်တင်၍” (၂ တိ၊ ၁း၉”
“ရှေးကပ်ကာလမရောက်မှီ ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသာအရှင်ဘုရား” (တိ၊ ၁း၂)
“ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်သည် ငါတို့သခင် ယေရှု ခရစ်တော်အားဖြင့် ယခုမှစ၍ ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းတန်ခိုးအားနုဘော်နှင့် အစွမ်းသတ္တိ အာဏာစက်ရှိတော်မူစေ သတည်း” (ယု၊ ၁း၂၅)။
ယနေ့ခေတ်သစ်ခရစ်ယာန်ပညာရှင်များထင်မှတ်မှားကြသလိုမဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်သည်ရူပအရာများနှင့်အချိန် ကာလများကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူကြောင်းဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယရာစုနှစ်တွင် Justin Martyr ကသူ၏ Hortatory Address to the Greeks စာအုပ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်မှာက Plato သည် ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူ အချိန်ကာလ ဖြစ်တည်လာခဲ့သည့် အသိပညာကိုရရှိခဲ့သသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
“ကမ္ဘာနှင့်အတူအချိန်ကာလကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား? စကြာဝဌာကြီးနှင့်အတူ အရာခပ်သိမ်းတို့သည် စနစ်တကျဖြစ်စေရန် အတူတကွဖြစ်တည်လာခဲ့ပြီး၊ လောကီသားများအတွက် အဖြေစစ်နေရာယူလာသော နောက်တွင် လည်း အတူတကွကွယ်ပျောက်သွားကြရပါလိမ်မ့်ည်။ ထိုသို့ပြောခဲ့သော Plato သည်သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော သမ္မာကျမ်း၏ ပညာတ်တော်ငါးကျမ်းမှသင်ယူလေ့လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါလား?”
အပြစ်တရားမကျရောက်မှီတွင်ဘုရားသခင်မည်သည့်အရာများလုပ်နေပါသနည်း။ အဖြေနှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ နံပါတ်တစ်မှာ အချိန်ကာလမတိုင်မှီတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွနု်ပ်တို့မှီတင်းနေထိုင်သော ကမ္ဘာကြီး ဖန်ဆင်းခြင်း၏ အကြောင်းတရားကြောင့်တည်ရှိနေသောအကျိုးဆက်သာဖြစ်သည်။ အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားများဖြစ်တည် လာသည်ဟုဆိုကြသည်မဟုတ်လား သို့သော်လည်းထိုအဆိုမမှန်ပါ။ အချိန်ကာလမတိုင်ခင် မည်သို့သောအကြောင်းတရား သည်အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်မည်နည်း။ ထို့ကြောင်းအကြောင်းတရားမရှိဘဲ အဘယ်အရာများဖြစ်တည်နိုင်အံ့နည်း။ ထို့ကြောင့် သယမ္ဘူသံအရှင်ဘုရားသည်ကား ထိုသို့သောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတည်းဟူသော ပညာတ်သဘော အထက်၊ ပရမတ္ထသဘောတွင်ရှိနေသည်ကိုမမေ့သင့်။ ထိုအရှင်သည် ရူပအရာ၊ အရူပအရာတို့၏အရှင်သခင်ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ကာလသည် ကျွနု်ပ်တို့ပညာတ်သဘောရှိသည့်လောကီသားများအတွက်သာ ဖြစ်စေခဲ့သောကြောင့် မြင့်မြတ်သော ဘုရားသခင်အားထိုပညာတ်သဘောဖြင့်တိုင်းတာ၍မရနိုင်၊ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် ပရမတ်တရား ပင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်ပါလား (ကော၊ ၁း၁၅-၁၇)။
ဒုတိယအနေနှင့်အဖြေစကားမှာ ဘုရားမြတ်ရှင်သည် အချိန်အတိုင်းအတာကာလပေါင်းများစွာတို့မတိုင်မှီ တည်ရှိ တည်နေတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကာလသည် ပညာတ်သဘောတရားများတွင် တည်ရှိလည်ပါတ်ကာ အကြောင်း တရားနှင့် အကျိုးတရားတို့ကိုပြသနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အချိန်ကာလနှင့်အညီအကြံအစည်တော်များကိုပြုတော်မူပြီး အချိန်ကာလမရှိသောကမ္ဘာကြီးကိုလည်ပါတ်စေတော်မူခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ကာလ အစ၊ အဆုံးမရှိသော ကမ္ဘာကြီးသည် ဖြစ်တည်ခြင်းရှိသကဲ့သို့ အဆုံးလည်းရှိလာပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် အာဒိကနှင့် အန္တိမအရှင် ဘုရား၏အစီအစဉ်တိုင်းတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အထက်ပါ စကားစုများကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ပါက မပြောင်းမလဲတည်ရှိ တည်နေတော်မူသောဘုရားသခင်အတွက် အချိန်ကာလကိုဖြစ်တည်စေသောအရှင်အဖြစ် ရှင်းရှင်း လင်းလင်းမြင်တွေ့စေပြီး ပညာတ်သဘောအတိုင်း တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းမှကင်းလွတ်သည်ကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရာတွင် စကြာဝဌာသည်ထာဝရတည်ရှိနေပါက ဘုရားသခင်သည်ကျွနု်ပ်တို့ကို ထာဝရကာလတိုင် လမ်းပြကူမရန်မလိုပါ၊ ထို့အတွက်လည်း ဘုရားသခင်သည် လူသားတိုင်းအတွက်တည်ရှိနေရန်လည်းမလိုပါ။ ထို့အတွက် လည်း ၂၀ ရာစုနှစ်က ဘုရားမယုံကြည်သူတို့က စကြာဝဌာကြီးသည် အစရှိခဲ့သော်လည်း ထာဝရတည်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကျင့်သုံးခဲ့ခြင်းသာ။ ဘုရားမယုံကြည်သူတို့က စကြာဝဌာကြီးသည် ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပေါ်စေသည့် အကြောင်းရှိ ကြောင်းကို စောင်းပါးရိပ်ခြည်ဖြင့်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း၊ ၁း၁ တွင်ပါရှိမှုကိုလက်ခံသော်လည်း ထိုဖေါ်ပြမှု ကိုငြင်းပယ်နိုင်ရန်အတွက် ထွင်ခဲ့သည်ကာ အလင်္ကာမြောက်စွာဖြင့် “Science” သမုတ်ခဲ့ကြပြီးဘုရားတည်ရှိမှုကိုရှင်းထုတ် နိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။သို့သော်မရလာသည့်အဆုံးတွင် ဘုရားနေရာကိုအခြား(god သို့မဟုတ် gods)ဖြစ်တည်မှုများ ဖြင့် အစားထိုးအသုံးပြုခဲ့ကြတော့သည်။ လောကတွင်အကြောင်းတရားကြောင့် အကျိုးတရားရှိသည်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေ သည့်ကမ္ဘာတွင် ပညာတ်သဘော၏အထက် ပရမတ်အရှင်ရှိကြောင်းထင်ရှားစေပါသည်။
Stephen Hawking, George Ellis နှင့် Roger Penrose တို့က ကာလ၊ ဒေသနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ ကာလသည်ကား ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူဖြစ်တည်လာခဲ့ပြီး၊ စကြာဝဠာကြီးနှင့်ပါတ်သက်သောအခါတွင်လည်း ကမ္ဘာကြီးသည် ထာဝရမဟုတ်၊ အစကနဦးအချိန်ရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ (The Universe is Not Eternal, But Had A Beginning). ထိုသို့သော အဆိုအမိန့်များ၏သဘောတရားကား ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းသည်နှင့် အချိန်ကာလနှင့် ဒေသတို့လည်းတည်ရှိနေကြောင်း ရှင်းလင်းစေသည်မဟုတ်ပါလား။
ဘုရားမည်သည်ကားဖန်ဆင်းခံမဟုတ်သလို၊ လူတို့မှလည်းဖန်ဆင်း၍မရစကောင်းပါ၊ ထိုနည်းတူ ကာလ၊ဒေသ တို့နှင့်စပ်လျှဉ်း၍လည်း ကန့်သတ်ထားခြင်းအောက်တွင်မရှိ။ သယမ္ဘူသံအလိုလိုဖြစ်တည်တော်မူပါသည်။ကမ္ဘာကြီးသည် အလိုလိုဖြစ်တည်လာပြီး ထာဝရတည်ရှိနေပါက ဆက်လက်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအတွက် ထိမ်းသိန်းစောင့်မသူလိုအပ်သည်က အလိုလိုဖြစ်တည်လာခြင်းကို ပြသနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်အလိုလိုဖြစ်တည်လာသည်နှင့် သဘာဝဓမ္မဟူသောစကားတွက် သက်သေသက္ကာယတို့သည်ယနေ့တိုင်မည်သူမျှမပြဆိုနိုင်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ If God Created Everything, Who Created God? by Rich Deem အားမြန်မာမူပြုသည်။
Tags # တရားဒေသနာ # ဒဿန # ဘုရားအဖြစ်တော်
by Samuel Soe lwin - 1:21:00 AM
Tags တရားဒေသနာ, ဒဿန, ဘုရားအဖြစ်တော်